Anyị Uru - SHENZHEN KAISHENG PCB CO., LTD
Kedu ihe kpatara iji rụọ ọrụ na PCBFuture
You na-achọ ndị ọkachamara ga - enyere gị aka ịkọkọta ụdị PCB dị elu na obere olu na - aga n’oge yana n’ọsọ asọmpi?
Kemgbe ọtụtụ iri afọ nke ahụmịhe na ụlọ ọrụ eletrọniki, PCBFuture bụ ebe a iji nye ọrụ nkwụsị PCB na njedebe na njedebe maka ndị na-emepụta na azụmahịa.
Ma ị na-a electronic mmebe na-achọ a pụrụ iche PCB nzukọ prototype ma ọ bụ ihe injinịa azụmahịa na-achọ na-ezukọta a obere-na-ọkara olu e biri ebi sekit mbadamba, anyị ga-ahụ n'anya na-enye gị elu àgwà ngwaahịa na magburu onwe ọrụ.
1. Elu àgwà PCB n'ichepụta ọrụ
PCB bụ isi nkuku nke ngwaahịa kọmputa. PCBFuture amalite azụmahịa si biri ebi circuit iba mmepụta, ugbu a, anyị bụ otu n'ime ndị na-eduga ụwa e biri ebi circuit iba n'ichepụta ụlọ ọrụ. Anyị agafeela asambodo nchekwa UL, IS09001: 2008 mbipute nke asambodo sistemụ mma, IS0 / TS16949: mbipute 2009 nke asambodo ngwaahịa akụrụngwa, na asambodo ngwaahịa CQC.
2. Turnkey PCB Ọrụ
N'ime afọ iri nke ahụmịhe na mmepe, ịgha ụgha, nzukọ na ule nke PCBs omenala, anyị nwere ike ịnye ọrụ zuru oke, site na mgbakọ PCB, mgbakọ PCB, ụdị bọọdụ bọọdụ dị iche iche, ọrụ ntinye ọrụ. Anyị turnkey PCB ọrụ nwere ike inye otu nkwụsị shop obibia nke nwere ike inyere gị aka ịzọpụta ego, oge na nsogbu. All anyị ọrụ na-ekwe nkwa àgwà na-eri-irè price.
3. Professional prototype PCB nzukọ na ngwa n'aka nke PCB nzukọ ọrụ
Prototype PCB nzukọ na ngwa n'aka PCB nzukọ mgbe a nsogbu n'ihi na ọtụtụ electronic emepụta na ụlọ ọrụ. PCBFuture nwere ike nweta PCB nzukọ gị prototype gị na asọmpi ahịa na ngwa ngwa mgbanwe oge. Kedu nke ga - enyere gị aka itinye ngwaahịa kọmputa gị n’ahịa ngwa ngwa na ọnụ ọnụ ọnụ. Anyị nwere ọkachamara na mgbanwe prototype PCB nzukọ otu aka akụkụ nile nke usoro gụnyere circuit mbupụta n'ichepụta, ị nweta nke mmiri, electronic nzukọ na àgwà akara. Ya mere ndị ahịa anyị nwere ike ilekwasị anya na nhazi na ọrụ ndị ahịa.
4. Nwayọọ ndu oge karịa ụgwọ dị ala
Na omenala, ndị ahịa kwesịrị inweta nkwupụta ma jiri ya tụnyere ndị nrụpụta PCB dị iche iche, ndị na - ekesa ya na ndị na - akpọkọta PCB. Isoro ndi ozo di iche ga - ewe oge na ike gi, karisiri ihe di iche iche nke siri ike ichota. PCBFuture mbọ iji nyere gị dozie nsogbu na-enye a pụrụ ịdabere na Onye-nkwụsị PCB ọrụ, anyị nwere ike inye na prototype na olu PCB nzukọ ọrụ. Centralization na mfe nke ọrụ, ezigbo n'ichepụta na obere nkwurịta okwu ga-enyere mkpumkpu ụzọ oge.
Kwesịrị zuru turnkey PCB ọrụ ga-amụba na-eri? Azịza ya bụ Mba na PCBFuture. Ebe ọ bụ na ego ịzụta ihe anyị nwere buru ibu buru ibu, anyị nwere ike ị nweta ego ka mma site na ụwa maara nke ọma ndị na-emepụta ma ọ bụ ndị na-ekesa ya. Ọzọkwa, anyị na-arụ ọrụ tubelined ọrụ maka turnkey PCB iwu nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma centralized nhazi a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke RFQs na iwu. The nhazi na-eri n'ihi na onye ọ bụla turnkey PCB oru ngo na-belata, na anyị price bụ ala n'okpuru otu ọnọdụ nke mma-emesi obi ike.
5. Ezigbo uru tinye ọrụ
> Enweghị min iwu achọrọ, a na-anabata 1 ibe
> 24 awa nkwado teknụzụ
> 2 awa PCB nzukọ kwuru ọrụ
> Ọrụ ejiri n'aka
> Free DFM ego site ọkachamara injinia
> 99% + ọnụego afọ ojuju ndị ahịa